Cunug ku dhashay indho la’aan wuxuu ku dhamaaday inuu helo qoys kadib markii hooyadiis ka tagtay - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Cunug ku dhashay indho la’aan wuxuu helay qoys kadib markii hooyadiis ka tagtay - SANTE PLUS MAG
Waalidiintu waxay soo dhaweynayaan warka ilmo aan weli dhalan oo leh rajo badan iyo riyooyin badan. Si kastaba ha noqotee, ogaanshaha ugu horreeya ee dhakhtarku sameeyo ee la xidhiidha ilmaha dhasha ah mararka qaarkood wuxuu noqon karaa mid keenaya war xun oo muujinaya jiritaanka cudur, cillad ama a wax aan caadi ahayn oo ku dhaca dhalaanka cusub.
Hooyadii Alexander ayaa isaga tagtay markuu dhashay
Adduunyada oo dhan, nasiib darro maalin walba waa laga tagaa carruurta. Sida wiilkan yar ee laba jirka ah ee looga tagay dariiqa, Alexander K. waa ilmo ku dhashay Ruushka oo ay ka tagtay hooyadiis. Sida laga soo xigtay maalinlaha reer Arjantiin Clarin, tan dambe waxay xukuntay inay awoodi kari weyday inay daryeesho isaga, gaar ahaan xaaladdiisa aan caadiga ahayn. Xaqiiqdu waxay tahay tan iyo markii uu dunida yimid, inuu la ildaran yahay cudur naadir ah oo loo yaqaan "SOX2 anophthalmia syndrome" kaas oo lagu garto maqnaanshaha kubbadaha indhaha taasoo keenta indho la’aan guud iyo mid aan laga soo kaban karin.
Alexander wuxuu ku dhashay Ruushka haatana wuxuu jiraa 10 bilood Source: Valery Kataksin
Kalkaaliye caafimaad oo ilaalinayay markii uu kaliya jiray 6 bilood ayaa u sheegay Daily Mail inuusan ka duwaneyn carruurta kale, inuu u ciyaaray una dhoola cadeeyay sida ilmo kasta oo caafimaad qaba uu sameeyo. Waxay raacisay: “Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro oo uu dabaasho, waa ilmo runtii faraxsan! ".
"Alexander-kii yaraa ee loo yaqaan Sasha wuxuu ku dhashay indho la'aan" Source: Valery Kataksin
Marka laga reebo laba fiixood oo aan fiicnayn oo ku yaal wejigiisa tan iyo dhalashadiisa oo waliba ku dambayn doona in laga saaro wakhti yar kadib, wiilka yar sifiican ayuu u shaqeynayaa wax cudur ah oo la xiriira xaaladdiisa ma jiro sababtoo ah waa inaad ogaataa Cudurka 'SOX2 anophthalmos syndrome' waa mid dhif iyo naadir ah oo wuxuu ku dhacaa oo keliya mid ka mid ah 250 oo carruur ah badiyaa ma taabto indhaha oo keliya laakiin sidoo kale qaybaha kale ee jidhka, sida xubnaha taranka ama habdhiska dareenka.
Alexander wuxuu u baahan yahay dabagal joogto ah inaad hesho nolol caadi ah intii suurtogal ah
Maqnaanshaha awood u siinta isaga inuu arko maalin adduunka ku wareegsan maalin uun, dhakhaatiirtu dhinaca kale, way awoodaan kubbadda indhaha oo ku jira godadka isha si aanu wejigiisu u qalloocin muddo ka dib. Wuxuu sidoo kale u baahan doonaa qalliin 6dii biloodba mar si uu ugu beddelo adduunyo waaweyn.
Alexander wuxuu la ildaran yahay SOX2 anophthalmos syndrome Source: Valery Kasatkin
Thanks to himiladiisa nololeed, Alexander yar wuxuu awood u yeeshay inuu kasbado quluubta dhammaan kuwa kula kulmay meel u dhow ama fog wuxuuna caado u leeyahay inuu ugu jawaabto isagoo dhoola cadeynaya dhammaan codadka la yaqaan ee uu maqli karo. Waa la korsan karaa waana helay qoys jecel diyaar u ah inay daryeesho isaga duruufaha oo dhan. Waxaan rajeyneynaa inuu heli karo dhammaan jacaylka iyo damqashada uu u qalmo si uu weligiis u xusuusto in adduunkan aysan ahayn oo keliya dadka doortay inay isaga dhaafaan. Sida Alexander, tan wiil yar oo indhoole ah oo agoon ah ayaa la kulmay nin noloshiisa beddelay.
Waalidiinta si kala duwan ayey u dhaqmaan marka ilmahooda aan dhalan uu leeyahay naafo
Sida buugga caafimaadka ee Faransiiska "Ku Dhawaaqida Naafanimada Hooyada Uurka" uu sharxayo, falcelinta dadku waa mid is bedbedala oo ku kala duwan xagga xoojinta. Qaarkood si kastaba ha noqotee waxaa laga yaabaa inay ku suntan yihiin rabshad iyo xitaa inay khilaaf ka dhex abuuraan lamaanaha. Iyadoo aan lagu xisaabtamin saamaynta ay leeyihiin dadka weheliya iyo shirkadda oo si kama 'ah waalidiinta ugu riixi karta dhanka masuuliyad daro, xitaa falal dambiyeed.
Qaar badan oo ka mid ahi waxay ku dhammaadaan xaalad " maqal la'aan maskaxeed »Markuu takhtarka takhasuska leh u sheego xaqiiqooyinka una sharaxo nooca anomaly iyo sida loola dhaqmo. Naxdintu waxay gabi ahaanba xukumi kartaa iyaga oo ka dhigi kara inay si toos ah ugu dhacaan dabinka faham la'aanta difaaca. Diidmadani waxay ku dambaysaa xaalado badan iyada oo loo beddelayo rabitaan ah in laga tago. Weli kuwa kale ayaa qalooca xitaa sii dheeraada. Sida ay tahay kiiskan wiil yar oo indhoole ah ayaa naafo u garaacay saaxiibkiis hooyadiis.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/un-bebe-ne-sans-yeux-a-fini-par-trouver-une-famille-apres-que-sa-mere-lait-abandonne /
OL: Lyonnais-kii hore wuxuu garaacay astaamaha wuxuuna aamusay Jean-Michel Aulas - FOOT 01
AKWA PALACE: Huteelkii ugu horreeyay 2020 ee Cameroon - Maamulaha CAMEROON
Tijaabo: Miyaad ka heli kartaa orsada ku dhex qarsoon deerada? - CAAFIMAAD PLUS MAG